राेजगार जीवनशैली प्रवास
रमेश भारती काठमाडौं, १३ जेठ
सुनसरीकी अमृता सुवेदी (नाम परिवर्तन) भारतको गोवामा रोजगारी गर्दै आएकी थिइन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न भारतले लकडाउन घाेषणा गरेसँगै उनी भारतको गोवामा २ हप्तासम्म अलपत्र परिन् ।
४ वर्षदेखि गोवाको एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा एकाउन्टेन्ट काम गर्दै आएको अमृताले बताइन् । गत मार्चमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भारतले लकडाउन गरेसँगै कम्पनी बन्द भएपछि गोवामा १५ दिन अलपत्र परेर बसेको अमृता बताउँछिन् ।
‘गोवाबाट असम नजिक पर्छ । तर, असम मणिपुरको बाटो भारतीय प्रहरीले नेपाली मूलको मान्छे हिँड्न नदिएपछि वनारस हुँदै नेपाल आउनुपर्‍यो । कोरोनाका कारण भारतबाट नेपाल आउँदा ४० दिन बाटोमा ठूलो समस्या झेल्नुपर्‍यो । यस अवधिमा मेरो जीवनमा के चाहिँ भएन’, उनले भनिन्, ‘छोरी मान्छे जता गए पनि असुरक्षित हुन्छन् । कोरोना भाइरसका कारण भारतदेखि ४० दिन लगाएर नेपाल आउँदा बाटोमा भोगेको पीडा कसलाई सुनाउनु ? भन्यो भने इज्जत जान्छ ।’
कोरोनामा समस्या परेका नभनी सबैले बाटोपिच्छे फाइदा लिएको उनको गुनासो छ ।
भारतीय प्रहरीको गिद्दे नजर यसरी सुरु भयो
भारतको वनारसको रेल स्टेसन नजिकको खानेेपानी भवनमा १५ दिन क्वारेन्टाइनमा भारतीय प्रहरीले राख्यो । ९ जना नेपाली महिला उक्त क्वारेन्टाइनमा बसेको सुवेदीले जानकारी दिइन् । क्वारेन्टाइनमा बस्दादेखि नै भारतीय प्रहरीले नेपाली युवतीमाथि गिद्दे नजर लगाउन थालेको अमृताले बताइन् ।
मुम्बईबाट फर्किएका ३ जना नेपाली युवती क्वारेन्टाइनमा सँगै बसेका थिए । ती युवती वैदेशिक रोजगारीमा युरोप हिँडेका रहेछन् । तर, भारतमा अलपत्र परेपछि घरबाट पैसा मगाएर नेपाल फर्किँदै गर्दा क्वारेन्टाइनमै परिचय भएको अमृताले बताइन् । वनारसमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा भारतीय प्रहरीले 'हामीले भनेको मान्यौ भने छिटो घर पुग्छौ' भनेर छेउ आएर केके भनेर दिक्दार लगाउने गरेको सुवेदीले बताइन् ।
वनारसमा प्रहरीलाई २ हजार भारू दिएपछि बङ्गलादेशको सिमानातिर जाने ट्रकमा प्रहरीले नै चढाएर पठाएको सुवेदी बताउँछिन् । ‘वनारसबाट सिलगुडी जाने ठूलो १६ चक्के ट्रकमा ४ जना युवती चढ्यौँ । हामीलाई वनारसबाट सिलगुडी पुग्न ९० किलोमिटर लेखेको पिलरसम्म आइपुग्न ५ दिन ३ रात लागेको थियो । बीच बाटोमा ट्रक ड्राइभरले खानेकुरा खुवायो’, उनले भनिन्, ‘सिलगुडी पुग्नभन्दा ५ घण्टा उतै ट्रकले झार्‍यो । त्यसपछि भारतीय पहेँलो रङको पोसाक लगाएका प्रहरीले बाटोमै भेट्टाए । केही पर जंगलमा लगेर सोधीखोजी गरे । कोरोना परीक्षण गरेका छौ ? भनेर सोधे । १५ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर आएको भनेपछि भ्यानमा चढाए । एउटा सानो घरमा लागेर राखे ।’
भारतीय प्रहरीको अफिसरले 'मैले भनेको मान्छौ भने सिमानासम्म पुर्‍याइदिन्छुु' भनेर शर्त राखेको सुवेदीले बताइन् । ‘हामी ४ जनाले हुन्छ भन्यौँ । उसले धेरै दिन भयो कोरोनाले बेबी नभेटेको, २ रात हामीसँग बस्नुपर्छ भनेर शर्त राख्यो’, सुवेदीले भनिन् ।
‘प्रहरीको शर्त सुनेपछि ४ जना एकछिन अलमलमा परेर हेराहेर मात्र गर्‍यौँ । बीचमा १ जना साथीले हिन्दीमा हुन्छ भनेपछि प्रहरीले भ्यानमा हालेर सिलगुडीतिर लगे । त्यसपछि २ रात भनेर ५ रात राखेर झापाको काँकडभिट्टापारि पानी ट्यांकी नजिकै पेट्रोल पम्पमा लगेर छाडेर फर्किए’, उनले भनिन्, ‘कोेरोनाका कारण अलपत्र परेर फर्किंदै गरेका होलान् नभनी फाइदा मात्र लिए । अब के भयो भनेेर कसरी घरमा भन्नू ? एकातिर कोरोनाको चिन्ता, अर्कोतिर प्रहरीसँग रात बिताउँदा नतिजा के होला भन्ने चिन्ताले ज्यान लिने भयो ।’
अमृतासँग अन्य ३ जना युवती सँगै आएका थिए । कोरोना भाइरसका कारण बाटोमा अलपत्र परेका थिए । उनीहरू वनारसमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा भेट भएर सँगै नेपाल आएका थिए ।
भारतमा नेपालीलाई हेप्छन्
भारतमा रोजगारी गर्दै आए पनि अमृता सुवेदी खुसी छैनन् । ‘सानैदेखि परिवारसँग भारतको असममा बसेर पढेकी हुँ । उतै पढेर गोवामै जागिर खान थालेकी थिएँ’, उनले भनिन्, ‘२ वर्ष भयो, परिवार भारत छाडेर नेपाल आएको छ । असममा आन्दोलन भएका बेला नेपालीभाषीमाथि आक्रमण सुरु भएपछि बस्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यही बेला परिवार नै बसाइँ सरेर आएको थियो ।’
‘कोरोना परीक्षणका लागि तापक्रम नाप्ने भन्दै ज्वरो नाप्न बसेका भारतीय प्रहरीले संवेदनशील अंग छुन्थे’, उनले भनिन्, ‘भारतमा बाध्यताले मात्र काम गरेर बसेकी हुँ । कतिपय साहुले नेपाली युवतीलाई इज्जत गर्दैनन् । उनीहरूले नेपाली युवतीलाई कार्यस्थलमै जे मन लाग्यो, त्यही गर्छन् । अर्काको ठाउँ भनेर धेरै नेपाली युवती सहेर काम गरिरहेका छन् ।’
सुवेदीसँग ५ जना महिला अहिले झापामा क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
(सामाजिक सञ्जालमार्फत् भारत हेल्थ मिसन नेपालका एक सदस्यको सहयोगमा यो सामग्री तयार पारिएको हो ।)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७, ०८:४०:००